Dhalinyarada Puntland oo Hogaan Cusub oo KMG ah Yeeshay – Radio Daljir
Dhalinyarada Puntland oo Hogaan Cusub oo KMG ah Yeeshay
Seteembar 9, 2015 7:15 b 0
Arbaco, September 09, 2015 (Daljir) — Wakiilo ka socda Daladaha dhalinyaradda Sagaalka Gobal ee Puntland ayaa maanta oo Arbaco ah magalada Garowe xarunta dowladda Puntland waxay ku doorteen hoggaanka Daladda guud ee dhalinyaradda Hayaan, taasoo KMG ah.
Munaasibadda doorashadda hoggaanka Hayaan ayaa lagu qabtay hoolka shirarka Hay’adda PDRC, waxaa kasoo qayb galay wasiirka dhalinyaradda, ku xigeenkiisa, wasiirka Amniga, Gudoomiyaha xafiiska xaquuqul Aadanaha, iyo marti sharay kale.
Xilka gudoomiyaha Daladda HAYAAN waxaa isku soo taagay Muqtaar Maxamed Ciise, Cabdinuur Maxamed Aadan iyo Aweys Axmed sardheeye halka ku xigeenkana ay isku soo sharaxeen labo dhalin yaro ah.
Wakiilada matalayay dalladaha dhalinyaradd gobaladda ayaa hoggaanka ku dooranayay cod lag ridayo sanduuq, waxana dooranayay labaatan xubnood, ugu danbeyntii dhaliyaradda ayaa u doortay Aweys Axmed Sardheeye gudoomiyaha Daladda oo mudo lix bilood ah si KMG ah xilka u hayn doono.
Sidoo kale waxaa loo doortey gudoomiye ku xigeen Farxaan Axmed Nuur, iyadoona guddiga doorashadu tilmaameen inay ku dhacday doorashada si wanaagsan.
Wasiirka dhalinyaradda iyo ciyaaraha Puntland Cabdiraxmaan Axmed Cabdulle oo khudbad ka jeediyay doorashada hoggaanka sare ee HAYAAN ka dib ayaa tilmaamay inay ku faraxsan yihiin habka dhalinyaradu isku doorteen, waxa kale uu sheegay in marka hore wasaraddu ku guulaystay dhismaha daladdaha dhalinyaradda ee gobal kasta, ayna markii danbe Garowe ku qabteen dajinta siyaasadda iyo hirgalinta magaca daladda guud ahaan kulminaysa ururada dhalinyarada gobaladda Puntland.
DAb Qabsaday Mid kamid ah Duulimaadyada British Airways
Wasiirka Xanaanada Xoolaha Puntland oo la kulmay Qaar kamid ah Xoolo Dhaqatada Gobolka Sanaag